हिजो सत्य लागेका कुरा आज कम सत्य र असत्य लाग्न थालेको छ । बिसौं शताब्दीमा आधा विश्व प्रभाव पारेको समाजवादी चिन्तन आज प्रश्नको घेरामा छ । एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवाद के हो ? यसले मानव समस्या समाधान गर्न सक्छ ? जस्ता प्रश्नहरू आज उठ्न थालेका छन् । विश्वमै प्रभावशाली विचारको आज विस्तारै रङ्ग खुइलिँदै गएको छ ।
दलाई लामा अहिले भारतको अरुणाचल प्रदेशदेखि कश्मीरसम्म मुख्य रूपमा फैलिएको हिमालय ग्रेट गेम अर्थात महाखेलका मुख्य खेलाडी हुन् । लामा सन् १९५९ मा तिब्बत छोडेपछि यस खेलको केन्द्रमा रहे । विशेष गरेर चीन, भारत र अमेरिकाबीच चलिरहेको यस खेलमा तिब्बती मूलका मानिसहरू बसोबास गर्ने भूटान, नेपाल, सिक्किम र स्वयं तिब्बत पर्छन् ।
मार्क्सवाद मात्र उत्तर होइन
विश्वभर साम्यवादी सत्ता लुप्त भइरहेको र मार्क्सवाद समकालीन पुँजीवादको आलोचना गर्न प्राज्ञिक क्षेत्रमा सीमित हुँदै गएको छ । यस सन्दर्भमा चिरपरिचित समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’ले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । के मार्क्सवाद सान्दर्भिक छ ?